Tanine, 969 monks, Buddhists and authorities ordered all the Muslims to get out of Tanine, if not they will burn, damage the properties and bodily harm | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Malaysian Malays Solidarity protest with Muslims of Myanmar
DNA tests show Duke of Cambridge ‘has Indian ancestry’ »
Myanmar Muslim Media‘s photo.
အဲဒါကို မကြေနပ်လို့ ဆိုပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က ၉၆၉ လှုပ်ရှားသူ များ လူ ၈၀ ကျော် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စုပြီး မရက၊ ရဲ နှင့် အခြားဌာနဆိုင်ရာများကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွေးနွေးစရာ လေးရှိလိုပါဟု အစည်းဝေးပုံစံခေါ်ယူပြီး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ရောက်ရှိသော အခါ ဘုန်းကြီးမှ “ကဲ မြို့မိမြို့ဖ ဒကာ ဒကာမတို့ ကိုယ်ပြောစရာရှိတာပြောကြတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ပြောသာပြော” ဟုဆိုရာ “ရတနာ စည်ဘီယာနဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်နုနုဝေ” မှ စပြီး အချက် ၅ ချက် တောင်းဆိုတယ်။
စသည့် များကို တောင်းဆို၍ ယခုလည်း “ကုလားတွေ ကြက်ခြံကာနေတာ သချိုင်းမြေထဲကျော်ပြီးတော့ ကာနေတယ် ကုလားတွေ မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့ သူတို့ သချိုင်းလုပ်ဖို့ ကျူးကျော်လုပ်နေတယ်” ဟု ပြောဆိုရာ ဘုန်းကြီးတွေ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြို့မိမြို့များ ချက်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ရာ ထိုသူများမှာ ၄င်းတို့ ကြက်ခြံ အကာများ အားပြုပြင်နေကြတာဖြစ်ပြီး မွတ်စ်လင်များလည်း မဟုတ်ကြောင်း ချင်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး မုတ်ဆိတ်များနှင့် ဖြစ်သော်လည်း မွတ်စ်ဆလင်မ်တွေမဟုတ်တာကြောင့် ပြန်လာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
အာဏာပိုင်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့နှင့် အပေါင်းအသင်းလုပ်နေသော တွန်းလှည်းသမား တစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူ၍ “ခင်ဗျား ကုလားတွေနဲ့ ပေါင်းတာများတယ်၊ ခင်ဗျား ကုလားတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြဿနာရှာလိုက်၊ တခုခု ဖြစ်တာနဲ့ ကျနော်တို့ ခင်ဗျားရှာမဲ့ တနေရာကို စောင့်နေမယ် ခင်ဗျားပြဿနာရှာလိုက်တာနဲ့ ကျနော်တို့ နောက်ကနေ ဝိုင်း ဗျင်းလိုက်မယ်၊ ပြီးတာနဲ့ ကုလားဆိုင်တွေ အကုန်လုံး ဖျက်ပစ်မယ်” လို့ ပြောကြားကြောင်း။ ထိုတွန်းလှည်းသမားမှ “ဟာ ကျနော်တော့ မလုပ်ချင်ဘူး ကျနော်ဒုက္ခရောက်တုန်းက သူတို့ အများကြီး ကယ်ထားတာ ကျေးဇူးရှိတယ် တခြားလူဘဲခိုင်းလိုက်ပါ” ဟုပြောလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်ပြီး “အခုတောင်မှ တချို့တွေ ပြဿနာတွေ စရှာနေကြကြောင်း တချို့ မွတ်စ်လင်မ်ဆိုင်တွေက ပစ္စည်းတွေယူပြီး ပိုက်ဆံမပေးတာတို့၊ ဆိုင်ကယ်တိုက်ဆီ စီးပြီး ပိုက်ဆံမပေးဘဲ ပြဿနာရှာတာတို့ လုပ်နေတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
This entry was posted on June 16, 2013 at 2:00 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.